Akwụkwọ akụkọ - Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Akwụkwọ Akụkọ
Debanye aha iji nweta akwụkwọ akụkọ na ozi gbasara ego na-eme n'ọdịnihu site na email.
Anyị chọrọ naanị aha mbụ gị na adreesị ozi-e.
Ihe omuma ị nyere ga-eji zigara gị mmelite email nke ị debanyere aha na agaghị ere ma ọ bụ gbazite onye ọ bụla ọzọ.
Nwere ike wepu aha na oge ọ bụla site na iji njikọ 'Wepu aha' na ozi ịntanetị ị nwetara.
Kwenye na ndenye aha gị
Ikwesiri ikwenye ndenye aha gị tupu ịmalite ịnweta mmelite ọ bụla n'aka anyị. Lelee anya na email nkwenye na igbe mbata gị wee pịa njikọ dị na ya.
Ozi nkwenye a na-abịarute ọsịsọ mgbe ị debanyere aha. Biko lelee nkwado, spam, junk, mmelite ma ọ bụ folda folda gị ma ọ bụrụ na ịnataghị nke a na igbe mbata gị.
Ihe ị ga-edebanye aha na ya
Họrọ otu ma ọ bụ nhọrọ abụọ dị n'okpuru:
1. Akwụkwọ Akụkọ & Ahịa
Tinye akà rà ma debanye aha na inweta akwụkwọ akụkọ Bromley, Lewisham & Greenwich Mind ihe dịka otu ugboro kwa ọnwa abụọ. Nke a ga-eme ka ị nụ akụkọ banyere ọrụ anyị na ọrụ anyị na-arụ iji nyere ndị obodo bi na nsogbu isi mgbaka na isi mgbaka aka. Anyị nwekwara ike izitere gị ụfọdụ ozi-e oge ụfọdụ na-akwalite ọrụ anyị nke anyị nwere olileanya na ọ ga-adọrọ mmasị mana anyị ga-anwale ọtụtụ ihe na akwụkwọ akụkọ kachasị.
Lelee akwukwo ozi nke May 2020 na Ahịa, na-egosi nzaghachi nke BLG Mind na COVID-19, ọrụ Greenwich MindCare Dementia ọhụrụ, na Izu Izu Mara Ahụike Mkpụrụ Obi
Budata akwụkwọ akụkọ Mee 2020
2. Fundraising Ihe & Ihe
Tinye akà rà ma debanye aha na ozi-e anyi na-enweta ego nke g’enwe ihe omuma banyere ihe omume na ihe omume, yana otu ị gha esi weputa ego, nye onyinye ma o bu hapuru ihe nketa iji kwado oru aka anyi na enyere ndi mmadu aka ha nwere oria isi mgbaka na oria ojoo.
Biko gụọ amụma nzuzo anyị na weebụsaịtị maka nkọwa ndị ọzọ.